ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်ပြေးဆွဲခွင့် ရရှိရေး မွန်ဝန်ကြ?? - Yangon Media Group
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက် မော် တော်ယာဉ်လိုင်းတွင် ကင်ပွန်းစ ခန်းဒေသခံများ၏ မော်တော်ယာဉ် များဝင်ရောက်ပြေးဆွဲခွင့်ရရှိရေး အတွက် မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့်ကင်ပွန်းစခန်းဒေသခံများ၏ ကိုယ်စားလှယ်အချို့ တွေ့ဆုံခဲ့ ကြောင်း၊ ကင်ပွန်းစခန်းဒေသခံများ အဖွဲ့မှ ဦးစိုးကိုကိုချစ်က အောက် တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြောသည်။
”ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာက စာ တစ်စောင်ပြန်တင်ပါ။ နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်မှာ အပြီးသတ်စာနဲ့အ ကြောင်းပြန်ပေးမယ်လို့ ပြောပါ တယ်။ ဘယ်နှစီးခွင့်ပြုပေးမယ်ဆို တာကတော့ မပြောဘူး။ ခွင့်ပေး မယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ကို ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုရင် မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအ ပေါ်မှ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြု ပါမယ်”ဟု ဦးစိုးကိုကိုချစ်က ပြော ကြားသည်။ ယခုအခါ ကျိုက်ထီးရိုးတောင် တက်မော်တော်ယာဉ်အသင်းတွင် ယာဉ်အစီးရေ ၁၅ဝ စီးပြေးဆွဲလျက် ရှိပြီး ခရီးသည်တစ်ဦးလျှင် ယာဉ် စီးခငွေကျပ် ၃ဝဝဝ ပေးရသည်။
”ကင်ပွန်းစခန်းက ဒေသခံ တွေ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လာတွေ့တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ပြောလိုက်တာက စာ တစ်စောင်ထပ်တင်ပါ။ ကက်ဘိ နက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်မှ စာနဲ့အကြောင်း ပြန်ပေးမယ် လို့ သူတို့ကိုပြောလိုက်တယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်သန်းဝင်း က ပြောသည်။ ဆံတော်ရှင်ကျိုက်ထီးရိုးစေ တီတော်ပွဲတော်ရာသီမှာ သီတင်း ကျွတ်လပြည့်နေ့မှ ကဆုန်လပြည့် နေ့အထိဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ၏ (၁၈)ကြိမ်မြေ??
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တီဘီရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး နိုင်ငံ ၃ဝ ထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်၊ လူဦးရေ တစ